Fa maninona Gisella Cardia? - Countdown ho an'ny Fanjakana
Ny vaovao hita maso an'i Marian tany Trevignano Romano any Italia ka Gisella Cardia dia vaovao. Nanomboka tamin'ny taona 2016 izy taorian'ny fitsidihana azy tany Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, ary nividy sarivongana an'ny Our Lady, izay nanomboka nitomany ra. Ireo fisehoana ireo dia efa lohahevitry ny fahitalavitra nasionaly fahitalavitra italiana iray izay nanehoan'ny mpahita ny tony na dia teo aza ny fanakianana nataon'ireo panelista tao amin'ny studio ho azy sy ny boky roa. A Nihil vato natolotry ny arseveka iray vao haingana nataon'ny fandikana poloney tamin'io faharoa io, Ao amin'ny Cammino con Maria ("Amin'ny lalana miaraka amin'i Maria") navoakan'i Edizioni Segno, mirakitra ny tantaran'ny fisehoana sy ireo hafatra mifandraika hatramin'ny hatramin'ny taona vahiny toa azy Nihil vato tsy ny tenany ihany no mahaforona in situ fankatoavana diocesan ny fisehoana, azo antoka fa tsy manjary. Ary ny eveka eo an-toerana ao Civita Castellana dia toa nanohana an'i Gisella Carda tamim-pahatoniana, rehefa nanome fidirana vao maraina tao amina trano fiangonana iray ho an'ireo mpitsidika be dia be izay nanomboka nivory tao an-tranon'i Cardia hivavaka, raha vao nanomboka niparitaka ny vaovao momba ireo fisehoana.
Mazava ho azy fa mety ho fitaka na fandrebirebena mihitsy aza ireo, toy ny fitomaniana ny sarivongan'i Virjiny sy sarin'i Jesosy ao an-tranon'i Gisella sy ny vadiny, Gianni's. Ny hevitra hoe anjely lavo dia mety ho niandohan'ireo hafatra, na dia toa tsy dia mahomby loatra aza, noho ny votoatin'ny teolojia sy ny fananarana ho amin'ny fahamasinana. Omeo ny fahalalantsika amin'ny alàlan'ny fijoroana ho vavolombelona momba ny exorcista mikasika ny fomba halan'ny anjely lavo sy natahotra an'i Maria mandra-pahatongan'ny fandavany ny anarany, ny tranga mety hamporisihin'ny olona tsindraindray ny famokarana ny teny hoe "Maria masina indrindra" ("Maria santissima") ao anaty rà eo amin'ny vatan'ny mpahita dia toa mifanakaiky eo amin'ny nil.
Hafatra avy amin'i Gisella Carda
Gisella - Manahafa an'i Noa
Nihevitra azy ho adala daholo ny rehetra, kanefa nanana Finoana izy.
Gisella - Rivotry ny ady
Aza miraharaha ilay toa fahanginana.
Gisella - Fotoanan'ny ady izao
Fifadian-kanina sy ny rosary.
Gisella: Fa maninona ianao no tsy mihaino an'i Neny?
Tonga ny famantarana ary mbola tsy mino ianao.
Gisella - Disguises diso
Hiezaka izy ireo hilaza fa natao ho tombontsoanao io.
Gisella - Horohoron-tany tany Vatican
Gisella - Tapitra ny fotoana
Gisella Cardia - Hiditra an-tsehatra vetivety aho
Ho tonga ny Thunderatra Lehibe.
Tokony ho mafy orina amin'ny finoana ianao mba ho tafavoaka velona.
Gisella - Sokafy ny fonao
Raha tsy izany dia tsy hahita ny varavaran'ny Lanitra hisokatra ianao.
Gisella - Navoaka ny devoly
Miomàna amin'ny fotoana mety amin'ny hazavana.
... taorian'ny fahotana rehetra natao?
Gisella Cardia - efa hitokona ny fitsaran'Andriamanitra
Mbola mangataka aminao indray aho amin-dranomaso: mivavaha, mivavaha, mivavaha fatratra
Gisella Cardia - Mandeha ny ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy
Mivavaha, mivavaha, mivavaha ho an'ny Fiangonana
Hanjaka eto an-tany ny fahasambarana.
Gisella Cardia - Tena fohy tokoa izao ny fotoana
Betsaka no tsy mahatsapa ny fianjeran'ny zava-drehetra.
Gisella Cardia - Ho lavo ny zava-drehetra
Azafady, anaka, tsy misy intsony ny fotoana, miova fo.
Gisella Cardia - Ho tonga tsy ho ela ny fampitandremana
Miomàna ho amin'ity hetsika lehibe ity
Gisella Cardia - Akaiky dia akaiky ny fanjakan'Andriamanitra
Tsy ho ela dia tsy hisy intsony io fotoanan'ny tahotra, ny tsy rariny ary ny fireharehana io.
Gisella Cardia - Ny zava-drehetra dia mitarika mankany amin'ny famotehana tena
Betsaka no nivarotra ny fanahiny tamin'i satana.
Gisella Cardia - Aza manalavitra an'Andriamanitra
Miankina amin'ny safidinao izao ny zava-drehetra.
Gisella Cardia - Feon'ny fieritreretana maro no hohozongozonina
Aza miandry mandra-pahatongan'izany hoe: manomàna ny tenanao ...
Gisella Cardia - Hofoanany ny sorona eokaristia amin'ny lamesa
Rehefa miray hina amin'ireo fahefana manerantany ireo fiangonan'izao tontolo izao, dia hisy ny fanenjehana marina ...
Gisella Cardia - Voafidy ho an'ireo fotoana ireo
Tsy ho ela, dia tabataba lehibe tao am-piangonana ...
Gisella Cardia - Tena Akaiky ny ady
Fa aza matahotra fa tonga eto aho mba hiaro anao.
Gisella Cardia - mbola tsy vonona ianao
Aza mandany andro intsony.
Gisella Cardia - Izay ho avy dia ho ratsy kokoa noho izany
Gisella Cardia - Fotoana ratsy indrindra ho an'ny olombelona
Gisella Cardia - Te hampisaraka anao ry zareo
Hamonjy anao tsy ho ela io Jesosy io.
Hampitaitra ny lanitra tsy ho ela ...
Gisella Cardia - Aza adino ny fitsarany
Tsy azo atao ny mivavaka maneran-tany mahatafiditra fivavahana maro hafa, satria amin'ity fomba ity dia hofoanana ny Kristianisma - ny fahamarinana tokana.
Gisella Cardia: miaina ny filan'ny nofo ankehitriny ny fiangonana
Ny sisa aminareo dia henjehina
Gisella Cardia - Maika izao
Gisella Cardia - Ho avy i Jesosy
Ho hitanao ny mahagaga ny fiainana vaovao.
Gisella Cardia - Rivotry ny ady
Ho eo anilanao foana aho.
Gisella Cardia - Mivavaha ho an'i Amerika
Dia hianjera tampoka ny zava-drehetra.
Ho avy ny Taratra ...
Gisella Cardia - Tsy hisy hitovy
Manakaiky kokoa ny fampitandremana.
Gisella Cardia - Vonona ny revolisiona iray
Amboary ny tranonareo ho fiangonana madinika.
Gisella Cardia - Hiverina ny filaminana
Miaritra kely kokoa.
Gisella Cardia - Fahanginana ampy noho ny tahotra
Aza mino izay lainga sy foroan'i satana.
Gisella Cardia - Tsy handao anao mihitsy Jesosy
Ianao izay nilaza ilay taminao hoe “fo” am-pahatokiana sy "ianao" dia tsy hisy na inona na inona.
Gisella Cardia - indro, efa nanomboka ny ady
Tandremo ny mpanao didy jadona sy izay tadiaviny.
Gisella Cardia - Mitandrema!
Te hitantana ny fiainanao sy ny sainao i Satana.
Gisella Cardia - Mino i satana fa efa nandresy izy
Homen'ny Tompo anao ao am-ponareo ny fitiavana, ka tsy ho very ny zanakao.
Gisella Cardia - lanitra vaovao sy tany vaovao
Vetivety dia hisokatra ny lanitra ary ho avy ny Zanak'Andriamanitra, Tompoko, hanamboatra lanitra vaovao sy tany vaovao.
Gisella Cardia - Hidina ny afon'ny afo
Kely sisa dia ho avy aminao io fampitandremana io, ka hanome anao ny safidy hitia ahy na satana.
Gisella Cardia - Tsy azo foanana izany
Ny zavatra ho avy rehetra dia ho ajanon'ny vavaka ataonao, saingy tsy azo foanana.
← Fa maninona ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta?
Fa maninona i Jennifer? →